Fire Na-alụ ọgụ equipments & mapụtara akụkụ Manufacturers na Suppliers - China Fire Na-alụ ọgụ equipments & mapụtara akụkụ Factory
Ductile ígwè grooved anwụrụ oyiyi akwa na njikọ / nkwonkwo / mwekota / n'ibu tee / threaded n'ibu ịkụ gọlfụ
Aha isiike ma na-agbanwe njikọ, ikpere aka, ịkụ gọlfụ, obe, belata, okpu, teknụzụ igwe, igwe na-arụ ọrụ ntanetị, ihe nkwụnye ọkọlọtọ ọkọlọtọ ANSI, ASTM, ISO Size 1/2 ″ -12 ″, DN15-DN500 Material Ductile iron QT450 Finish paint, Epoxy ma ọ bụ Galvanization, Dacromet Approval FM / UL / CE Usage 1. Automatic sprinkler system for fire protection on commercial, obodo na ọchịchị rụrụ dị ka ịnye mmiri, gas kpọbata, okpomọkụ kpọbata, wdg 2. Industrial pipeline usoro na mbupu, m ...
A na-ejikarị ya eme ihe na akpaka mmiri iji chebe ọkụ na azụmahịa, obodo na nke obodo. Dị ka, ọfịs, ụlọ akwụkwọ, kichin na ụlọ nkwakọba ihe; Ọrụ site na ọnọdụ okpomọkụ; Aidị dịgasị iche iche ịhọrọ; Mfe wụnye na iji. Njirimara na Ọrụ Model FESFR fire sprinkler Ihe Brass, chrome plating Updị Pụrụ Iche / Pendent / Horizontal Sidewall Norminal dayameta (mm) DN15 ma ọ bụ DN20 Ijikọ eri R1 / 2 ″ ma ọ bụ R3 / 4 ″ ...